Par Taratra sur 17/08/2019
Nanamafy ny fanadiovana ny toerana mihazo an’Androhibe handraisana ny papa François ny tao amin’ny Boriborintany fahaV. Niainga teo amin’ny Pulman hatreny Analamahitsy no nodiovina, nisantarana ny fanadiovana. Nandritra izany, nisy ny famafana ny arabe, ny fanapahana ireo bozaka sy lobolobo, fandraofana ireo fasika miangona eny amin’ny sisin’ny arabe. Tsy mijanona hatreo ny asa fanadiovana fa mbola hitohy amin’ny faritra rehetra izay mizotra mankeny Androhibe misy ny kianja Soamandrakizay izay hanaovana ny lamesa lehibe.
43 ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana avy amin’ny governemanta sinoa tamin’ity taona ity. Hahazo vatsim-pianarana ihany koa ireo mpampianatra manao fikarohana maniry ny hanatrika seminera any Sina. Ankoatra izay, hanampy amin’ny fanorenana fotodrafitrasa eny amin’ny oniversite izy ireo. Voakasik’izany ny oniversiten’Antananarivo sy ny oniversite Toamasina. Hatreto, manodidina ny 700 ireo mpianatra malagasy nisitraka ny vatsim-pianarana sinoa ary efa saika tafaverina eto an-tanindrazana avokoa ireo mpianatra teo aloha nitrangana olana, araka ny tatitra avy amin’ny masoivoho. Hatsangana tsy ho ela ny komity iraisan’ny roa tonta ahafahana mandinika ny fiaraha-miasa tokony hatao amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Toeram-piofanana momba ny fambolena sy fiompiana 12 manerana ny Nosy no hatsangana. Hahazo izany ny any Isandra, Bealanana, Brickaville, Tsihombe, Moramanga…Tanjona ny hananan’ny tanora fahaiza-manao amin’ny fambolena sy fiompiana izay mbola fototry ny fampandrosoana eto amintsika. Hatao izany mba tena hitondra vokatra sy hiroborobo ary hahavelona mihitsy.
Hisy ny fanamboarana oniversite vaovao efatra hatao ao Antsirabe, Soavinandriana. Ambovombe, Mandritsara , Antalaha, Ambatondrazaka, Anosy…Hanampy ireo oniversite efa mitsangana izy ireo hahafahan’ny tanora amin’ireny toerana ireny misitraka fampianarana mitovy ka tsy voatery handeha alavitra intsony rehefa manohy fianarana amin’ny anjerimanontolo.